SAWIRO:-Idaacadda Risaala oo deeq gaarsiisey Qoysas barakacayaal ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Idaacadda Risaala oo deeq gaarsiisey Qoysas barakacayaal ah
SAWIRO:-Idaacadda Risaala oo deeq gaarsiisey Qoysas barakacayaal ah
Maamulka Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho gaar ahaan qeybta gurmadka ee Risaala Foundation ayaa waxaa Maanta ay gaarsiiyeen Deeq kala duwan dad Barakacayaal ah oo ku nool Kaamam ku yaalla deegaanka Tareedisho ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Deeqdaan oo laga soo aruuriyey Dhageystayaasha Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa Dad Waayeelo iyo kuwa Araga la’ oo gaareyey 100 Qoys loo qeybiyey Bacaha roobka laga galo,kuwaas ku nool Kaamam ku yaalla xaafada Macaani deegaanka Tareedisho ee duleedka Magaalada Muqdisho,xilli laga cabsi qabo inay Roobab ka da’aan Magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda.
Agaasimaha Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho Maxamed Cabduwahaab Cabdullaahi ayaa sheegay in Bacaha Maanta qoysaska Barakacayaasha ah loo qeybiyey loogu talo galay inay kaga gambadaan Roob laga cabsi qabo in uu ka da’o deegaano badan oo dalka ah.
Waxaa uu sheegay in Idaacadda Risaala gaar ahaan qeybta Risaala Foundation ee Gurmadka ay sii wadi doonto Barnaamijyada lagu caawinayo dadka Danta yare e Barakacayaasha ah.
Qaar kamid ah Dadka barakacayaasha ah ee deeqda Maanta loo qeybiyey ayaa Maamulka Idaacadda Risaala uga mahad celiyeen deeqda la gaarsiiyey, iyaga oo sheegay in lagu soo aadiyey waqtigii loo baahnaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay digniin ka soo saartay Roobab dabeylo wata oo ku soo wajahan Soomaaliya,waxaana deeqda Bacaha ah ee Risaala gaarsiisey Maanta dadka barakacayaasha ah ay kaga gamban karaan hadii uu yimaado roobka dabeylaha wata.
Previous articleAskari lagu dilay Magaalada Dhuusamareeb
Next articleMadaxweynaha Hirshabeelle oo Wasiiro xilalkiika qaaday iyo kuwo cusubna Magacaabay